DataNumen: Ku saabsan DataNumen
Bogga ugu weyn > About DataNumen
Aasaasay sannadkii 2001, DataNumen, Inc. waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiye caalami ah tikniyoolajiyada soo kabashada xogta. Waxaan ka iibinay barnaamijkeena soo kabashada xogta abaalmarinta ku guuleysatay in ka badan 130 dal iyo in badan oo ka mid ah ganacsiyada ugu waaweyn adduunka, oo ay ku jiraan AT&T Global Network Services, General Electric Co., IBM, HP, Dell Inc., Motorola Inc., The Procter & Gamble Co., FedEx Corp., Xerox Corp., Toyota Motor Corp. iyo in badan oo kale.
Waxaan sidoo kale bixinnaa Qalabka horumarinta softiweerka (SDK) loogu talagalay horumariyeyaasha si ay ugu dhex dari karaan barnaamijyadooda tiknoolajiyadda soo kabashada xogta aan la qiyaasi karin barnaamijyadooda si habsami leh.
Hadafka aasaasiga ah ee DataNumen, Inc. waa in laga soo kabto inta ugu badan ee xogta laga helo masiibooyinka xogta ee aan ku talagalin sida ugu macquulsan. Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadeena casriga ah, waxaan ku dadaalnaa inaan u helno xalka ugu fiican ee suurtagalka ah macaamiisheenna isla markaana aan yareyno luminta musuqmaasuqa xogta sababo kala duwan awgood, sida cilladaha qalabka, cilladaha aadanaha, fayrasyada ama weerarada hacker.
DataNumen, Inc. wuxuu ka kooban yahay koox xirfadlayaal dib-u-soo-kabasho xog-xirfad sare leh leh takhasusyo kala duwan. Waxaan nahay koox dhalinyaro ah oo fikrado hal abuur leh u heellan soo saarista barnaamijka ugu wanaagsan ee soo kabashada xogta adduunka.
26 / F., Dhismaha Kooxda Quruxda Badan
Suite 791, 77 Wadada Connaught
1 Fagaaraha Trafalgar, Suite 290
Waqooyiga Ameerika DataNumen, Inc.
3422 Wadada Hore ee Capitol, Suite 1304